July 26, 2020 2098
गायिका सरीता कार्कीको आवाजमा रहेको तीज गीत ‘सँगी’ को म्युनिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
गीतमा शब्द करण न्यौपानेको रहेको छ भने संगीत पनि उनकै रहेको छ । गीतमा संगीत संयोजन निनोद बाजुरालीले ग’रेका छन् भने भिडियो निर्देशन शंकर विसिले गरेका छन् ।
भिडियोमा पछिल्लो समय नि’कै चर्चामा आएकी मोडल अञ्जली अधिकारी र देबेन्द्र क्षेत्रीको अभिनय रहेको छ । यो गीतको भिडियो तल छ ।
पछिल्लो समय अभिनेता राजेश हमाल महानायक हो कि हैन भन्ने चर्चा चलेको । हास्य कलाकार तथा निर्देशक दिपाश्री निरौलाले प्रकाश सुवेदी संग अन्तर्वाता दिने क्रममा राजेश हमाल महानायक हुन र ? भन्ने प्रश्नसँगै उनी विवादमा तानिएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला राजेश हमाल आखिर महानाय कुन वा होइन भन्ने पक्षमा धेरै तर्कहरु आएका छन् । तर समग्रमा राजेश हमाल महानायक नै हुन् भन्ने पक्षको बहुमत देखिएको छ ।
यसरी आफु विवाद’मा आएको केहिपछि हमालले सञ्चार’माध्यमलाई अन्तरवार्तामा पनि दिइरहेका छन् । यसै क्रममा सोमबार एपिवान टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’ पत्रकार टिकाराम यात्रीलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनी केहि समय भावु’क बनेका थिए ।
उनले दर्शकलाई याद गर्दै भने –‘ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म’का दर्शकले मलाई दिएको माया निकै अमूल्य छ । हिमाल पहाड तराईमा बस्ने हरेक मानिससँग मेरो कलाले नै आत्मि’य सम्बन्ध जोडि’दियो त्यो मेरो लागि गर्वको कुरा हो ।
अन्तरवार्तामा उनले नेपाली’पनमा आफु’लाई रमाउन मन लाग्ने भएकाले गर्दा नै नेपाली दर्शकले मलाई नेपाली दर्शक’ले रुचाएको बताए ।
पत्रकारले उनलाई तपाईल एक पटक झा’पाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि ? राजेश हमालले हाँस्दै भने, ‘एक पटक फिल्मको सुटिङमा झापामा १०,१५ दिनको बसाई भएको थियो ।
त्यहाँ राजेश हमाल बसेको छ रे भन्ने धेरै’ले सुन्नु भएको रहेछ । लक्ष्मी पुजाको दिन थियो की या के पर्व थियो । त्यहाँका महिलाले भगवान कृष्ण, राम लगाय’तको फोटो सहित’को थालीमा मेरो पनि फोटो राखेर पुजा गर्नुभएको थियो । तर म भगवान त होइन नी । ’
अञ्जली अधिकारीको तीज गीत हेर्नुहोस्….
Prevसुनको मूल्य १ लाख नजिक, आज कति पुग्यो तोलामा ? हेर्नुहोस्
Nextविजय शाहीले ‘इन्द्रेणी’ कार्यक्रम देखाए यस्तो चमत्कार (भिडियो सहित )
नायिका सुष्मा कार्कीले खोलिन् श्वेता खड्काको पोल (भिडियो सहित)